Soo degso AgustaWestland AW139 FSX & P3D - Rikoooo
downloads 16 766
Asalka waxa ka socda Kooxda Icaro. La qabsiga iyo wax ka badalida Carlos Palacio
Cajiib ah add-on ee AgustaWestland AW139 helikobtar. Mashiinkan wax lagu wadaago (daadgure caafimaad, hawlgallo booliis hubaysan, dab-damis, gargaarka degdega ah, iwm) ayaa loo adeegsadaa dalal badan qaab militari, dowlad ama rayid.
Koodh ka qaabeya qaabkan ayaa aad ugu eg helikobtarka dhabta ah. Qolka guriga waxaa si buuxda loogu qaabeeyey 3D. Qalabka duulimaadka badankood waxay u shaqeeyaan sida FMS. Waa muhiim inaad aqriso dukumintiga kahor intaadan u duulin helikabtar-kan maxaa yeelay jilitaanku waa heer aad u sarreeya. Dukumintiga kujira "Dukumiintiyadaada" waxaa ku jira feylasha soo socda: "Liiska Liiska Liiska" AW139.docx "," Liiska Liiska Liistada leh ee loo yaqaan "AW139.pdf", "FMS_guide.pdf", "Readme.docx", iyo "Type_Rating_Course.pdf".
Oo ay kujiraan seddex moodal iyo sadex nool: SAR, HEMS, iyo HEMS oo aan lahayn dabaqyo.
Qoraaga ayaa sheegay in XMLVARS.dll ee Doug Dawson uu u baahan yahay in la rakibo, laakiin dhab ahaantii, waa khalad dhankiisa. Si FMS u noqoto mid si buuxda u shaqeynaya waxaad u baahan tahay inaad ku rakibatid XMLVARS Tom Aguilo waxaa laga heli karaa halkan: https://www.fsdeveloper.com/forum/resources/authors/taguilo.1802/ FMS-ga ayaa qayb ahaan ahaan shaqeynaya iyada oo aan lahayn XMLVARS laakiin, tan ayaa sii socota OKAY.
Markaad duullimaad la bilaabayso AgustaWestland AW139 waxaad maqli doontaa qaylo-dhaan qiyaastii 30 sekan, waxaad u baahan tahay inaad sugto heerarku inay caadi noqdaan markaa qaylo-dhaantu joogsan doonto.
Qore: Asalka kooxda Icaro Group. La qabsiga iyo wax ka badalida Carlos Palacio
Hughes OH-6 taxanaha FSX